माेबार्इल एप डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! | Ekhabaronline.com
एजेन्सी | प्रकाशित मितिः शनिबार, मंसिर २५, २०७३ 3:22:07 PM | 80 पटक पढिएको |
जब कुनै स्मार्टफोन या ट्याब्लेटमा कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गरिन्छ, तब तपाईँको स्मार्टफोनबाट यसले तपाईंका व्यक्तिगत विवरण लिन्छ । उक्त जानकारी प्राप्त गर्नका लागि तपाईँसँग स्वीकृति माग्छ, त्यसबेला तपाइंले शुरुमै ‘सहमत छु’ भनेर जनाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले यस्ता एप्सहरु दिनदिनै असंख्य रुपमा वृद्धि भैरहेको अवस्थामा स्वीकृति लिष्ट देखेर तपाईले एप डाउनलोड गर्नेबारेमा सोंच्न जरुरी छ । तपाईँलाई जानकारी नभएको एप डाउनलोड गर्नु निकै खतरनाक हुन पनि सक्छ । एप तथा मोबाइल उत्पादन कम्पनीले यो पुरै प्रक्रियामा आफ्नो ब्यापारको मौका पर्खिरहेको हुन्छ ।
जब तपाईँको खरिद पूरा हुन्छ, तब तपाईँको क्रेडिट तथा डेबिट कार्डको बारेमा पनि ई–कमर्श कम्पनीले पूरै जानकारी प्राप्त गर्छ । तपाईँले एप डाउनलोड गर्दा तपाईँको फोन नम्बर, इमेल तथा सम्भवतः तपाईँको फोनको सबै नम्बरको बारेमा उसले जानकारी लिइसकेको हुन्छ । यदि तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटको एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने उक्त एपले तपार्इँकाे माेबाइल तथा स्मार्ट फोनबाट जानकारी अवश्य पनि लिने गर्छ ।
त्यस्तो एप डाउनलोड गरेपछि तपाईँको मोबाइलमा आएका कुनै पनि एसएमएस त्यो एपले पढ्न सक्छ । यदि तपाईँले फ्लिपकार्डको एप डाउनलोड गर्नु भयो भने तथा कुनै अमेजनबाट सामान खरिद गर्नुभयो भने पनि फ्लिपकार्डसम्म तपाई सबै सूचना पुग्ने गर्छ । तपाईँले आफ्नो मोबाइल वा ट्याबलेटबाट कुनै सामान खरिद गर्नको लागि खोजी गर्नुहुन्छ भने एक विशेष सफ्टवेयर तपाईँलाई मनपर्ने कुरामा पनि नजर राख्ने गर्छ । तपाईँको डिभाइसको इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेसबाट वेबसाइटको तपाईलाई मनपर्ने कुराबारेमा पनि पत्ता लगाउन सक्छ । त्यही जानकारीको आधारमा वेबसाइटले तपाईको त्यसही सामान देखाउँछ ।
यदि तपाईको बैंकसँग सम्बन्धित एसएमएस पनि त्यही मोबाइलमा आउँछ । तपाईँको बैंक ब्यालेन्स कति छ भन्नेसमेत उक्त एपसँग पुग्न सक्छ । त्यही एपबाट नै बैंकमा तपाईँको प्रत्येक पटक कति पैसा जम्मा भएको छ भन्ने समेत उक्त एपले पत्ता लगाउन सक्छ । एपको वा बैंकको अथवा कुनै पनि ई–कमर्स वेबसाइटले तपाईँको प्रोफाइल तयार गर्न मद्दत गर्छ । एक पटक यो प्रोफाइल तयार भएपछि तपाईँको बारेमा उसलाई अरु जानकारी प्राप्त गर्न धेरै नै सजिलो हुन जान्छ । त्यसकारण सबै एप डाउन लोड गर्नु निकै नै खतरनाक हुन्छ ।